Ny lahatsoratr'i Max Sudyin momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Max Sudyin
Tapitra ny fotoana izay namokarana atiny lehibe dia ampy. Ekipa fanontana izao dia tsy maintsy mieritreritra ny fahombiazan'ny fizarana, ary ny fandraisan'anjaran'ireo mpihaino no lohalaharana. Ahoana no ahafahan'ny fampiharana haino aman-jery mampiditra (sy mitazona) ny mpampiasa azy? Ahoana ny fampitahana ny metatrao amin'ny salan'isan'ny indostria? Pushwoosh dia nanadihady fanentanana fampandrenesana fanentanana ho an'ny haino aman-jery 104 mavitrika ary vonona hanome valiny anao. Inona avy ireo fampiharana haino aman-jery mirotsaka indrindra? Avy amin'ny zavatra hitantsika tao Pushwoosh,